Zerihuun Wadaajoo fi Wellistoonni Oromoo Sadii Gara Ameerikaa Deeman – YEROOBLOG
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests	 March 22, 2016 2 Minutes
Suraa: Wellistoota Oromoof Yeroo Buufata Xiyaaraa Duulasitti Simmanaan godhamuufi
Wellistoonni Oromoo afur : Zarihuun Wadaajoo, Shukurii Jamaal, Yaaneet Dinquu, Kadir Martuuu) fi qindeessaa muuziqaa kan ta’e Daawwit Taasisaa gaafa Bitootessa 17/2016 gara biyya Ameerikaatti imalaniiru jiru. Isaanis garasitti kan imalan Oromoota kutaa bulchinsa Ameerikaa adda addaa keessa jiraataniif hojii muuziqaa isaanii dhiyeesuufi. Akka isaan gara Ameerikkaa deeman Dhaabbata Piroomooshinii Shew Entertainment jedhamu akka ta’e beekameera.
Wellistoonni kunneen gaafa Buufaa Xiyaara Duules kan magaala Washingitan argamutti gahan simannaan ho’aan Oromoota achi jiraataniin taasifameera. Guyyaa itti aanu, jechuun, gaafa Bitootessa 19, 2016 qophii konsartii ‘Oromoo Benefit Concert’ kan Waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoota biyya keessatti osoo qabsaa’anii midhamaniif gargaarsa gochuuf qopheesse irratti argamuun dinqisiifatootaa fi jaallattoota isaanii waliin wal arganiiru. Waltajjii kanarratti Kadir Martuu osoo haasaa’aa taasisaa jiruu, dararaa mootummaa Wayyaaneetiin dargaggoota fi barattoota Oromoo irraan gahaa jiru yaadate boo’uudhaan, namoota hedduu yeroo boosisu argamee jira.
Wellistoonni Oromoo Oromiyaa keessa jiran biyya alaa deemanii muuziqaa isaanii dhiyeessuun kan baratame hinturre. Kunis kan ta’eefi wellistooni Oromoo yeroo baay’ee sirboota qabsoo waan sirbaniif akka isaan gara biyya alaa hindeemne gama mootummaatiin dhiibbaan cimaa irratti godhamaa ture. Kana malees, dhaabbanni wellistoota Oromoo akka qophii isaanii dhiyeessatan haala mijeessu hinturre. Yeroo dhiyoo as garuu (bara 2012/3 irraa kaasee) wellistoonni Oromoo gara biyyoota Ammeriikaa fi Awurooppa deemuun qophii isaanii dhiyeeffachaa jiru. Bara 2013, wellistooni Oromoo afur jechuun Haacaaluu Hundeessaa, Jamboo Jootee, Abbush Zallaqaa fi Nugusuu Taamiraat haala Shewa Entertainment mijeeseefiin gara Ameerikaa deemuu danda’aniiru. Isaan boodas wellistoonni akka Addisuu Mangistuu, Addisuu Furgaasaa, Astar Walda Gabri’eel fi Adinaan Mohaammad gara Ameerikaatti imaluu danda’aaniiru. Bara 2015 immoo Shukurii Jamaal fi Yaaneet Dinquu qindeessaa muuziqaa Daawwit Taasisaa wajjin ta’uun gara Awurooppaa deemuun sirboota isaanii dinqisiiftoota isaaniif dhiyeessu danda’aniiru. Yeroo adda addaaatti wellistoonni Oromoo gara giddu galeessa bahaas deemuudhaan sagantaa adda addaa irratti hirmaachaa jiru.
Akkuma beekamu wellistoonni Oromoo sirboota qabsoo Oromoo finiinsan waan sirbaniif karaa diinagdee fayyadamtoota hintaa’ane. Isaanis kaayyoon isaanii qarshii osoo hintaane aadaa, afaan, seenaa fi qabsoo uummata Oromoo akka inni gara fuulduraatti tarkaanfatu gochuudha. Gaheen wellistooni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qaban baay’ee guddaadha. Wellistoonni Oromoo sabaaba sabbontota ta’aniif, sababa Oromummaa jedhaniif, sababa hacuuccaa fi cunqurasaa uummta Oromoorra gaha jiruu sirbaniif, mootummaa abba irree waan balaalefataniif yeroo adda addaatti ajjefamaniiru, mana hidhaatti dararamaniiru, biyyi isaan gad lakkisanii akka baqatan godhamaniiru.
Yeroo ammaa garuu tattaaffii Oromoonni biyya alaa jiraatan (Oromoo Diaspora) godhaniin wellistonni keenya karaa dinagdees fayyadamtoota akka ta’an haala mija’aafi jira. Kun baay’ee kan nama gammachiisu dha. Akkasumas dargaggoota Oromoo yeroo amma kana muuziiqaa ajaa’ibaa nu buhaarsaa jiraniif hamilee guddaa kenna. Kun immoo muuziqaan Oromoo akka inni guddatu shoora guddaa ni taphata.
Previous Post Oromoonni Biya Alaa Jiraatan Hiriira Nagaa (Global Solidarity Rally) Taasisan
Next Post በህጻንነቷ የተቀጨች አገር…